Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.5.2 Thola heterogeneity
Uma usushukumise abantu abaningi ukuba basebenze inkinga yangempela yesayensi, uzothola ukuthi abahlanganyeli bakho bayoba ngezindlela ezimbili eziyinhloko: bazohluka kokubili emakhono abo kanye nemizamo yabo. Ukusabela kokuqala kwabacwaningi abaningi bezenhlalakahle ukulwa nalokhu hterogeneity ngokuzama ukukhipha abahlanganyeli abathintekayo bese bezama ukuqoqa inani elinqunyelwe lwazi kuwo wonke umuntu osele. Lena indlela engafanele yokuklama iphrojekthi yokubambisana okukhulu. Esikhundleni sokulwa ne-heterogeneity, kufanele uyisebenzise.
Okokuqala, asikho isizathu sokubamba iqhaza abahlanganyeli abaphansi. Ezingcingo ezivuliwe, abahlanganyeli abanamakhono abangekho abanezinkinga; iminikelo yabo ayilimazi muntu futhi ayidingi isikhathi sokuhlola. Ekuqhathaniseni kwabantu nokusabalalisa amaphrojekthi eqoqo lemininingwane, ngaphezu kwalokho, ifomu elihle lokulawulwa kwekhwalithi liza ngokusebenzisa redundancy, hhayi ngokusebenzisa ibha eliphezulu yokubamba iqhaza. Eqinisweni, kunokungabandakanyi abahlanganyeli abaphansi, indlela engcono yokubasiza ukuba benze iminikelo engcono, njengoba nje abacwaningi be-eBird benze.
Okwesibili, asikho isizathu sokuqoqa inani elinqunyiwe lwazi kusuka kumhlanganyeli ngamunye. Ukubamba iqhaza emisebenzini eminingi yokubambisana ngokubambisana kuyafana kakhulu (Sauermann and Franzoni 2015) , ngenani elincane labantu elifaka okuningi-ngezinye izikhathi libizwa ngokuthi ikhanda elikhulu- futhi abantu abaningi banikela kancane-ngezinye izikhathi ngokuthi umsila omude . Uma ungaqoqa ulwazi kusuka enhlokweni enamafutha nomsila omude, ushiya ulwazi oluningi olutholakali. Isibonelo, uma i-Wikipedia yamukele ukuhlela okungu-10 kuphela kwezingu-10 ngomhleli, ilahlekelwa ngu-95% (Salganik and Levy 2015) . Ngakho-ke, ngezinhlelo zokubambisana eziningi, kungcono ukuhlola i-heterogeneity kunokuzama ukukuqeda.